अब ललितपुर महानगरमा बिहानदेखि साँझसम्म अत्यावश्यक पसल खोल्न पाइने – Khabar Silo
ललितपुर महानगरपालिकामा अत्यावश्यक पसलहरू बिहानदेखि साँझसम्म खोल्न पाइने भएको छ।
सोमबार महानगरपालिकाको संयोजनमा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विग स्टोर संचालक तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीबीच बसेको बैठकले बिहानदेखि साँझसम्म पसल खोल्न दिने निर्णय गरेको हो।
महानगरले २९ वटै वडाका ठूला खाद्य स्टोर, किराना पसल, फलफूल तथा तरकारी, औषधिजस्ता अतिआवश्यक पसलहरू खोल्न निर्देशन दिएको हो।
ठूला स्टोरहरू बिहान १० बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म र साना पसलहरू बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजे सम्म खुल्ला राख्न अनुमति दिइएको हो।
तर पसल अगाडि साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था वा ह्यान्ड सेनिटाइजको व्यवस्था गर्न समेत अनुरोध गरेको छ।
साथै स्टोरभित्र रहेको क्यास काउन्टर एउटा मात्रै भएमा तीन जनालाई मात्र प्रवेश गराउन अनुरोध गरेको छ। ग्राहकलाई पनि मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गरिएको छ।
पसलबाहिर लाइन बस्दा दुई मिटरको फरकमा बस्न भनिएको छ भने भित्र एक मिटरको दूरी कायम गर्न भनिएको छ। स्टोरका कर्मचारीले अनिवार्य परिचयपत्र लगाउनुपर्नेछ।
साना खाद्य स्टोर तथा तरकारी फलफूल पसलहरूलाई मूल्यसूची देखिने गरी राख्न अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै ग्राहक आफैलाई सामान छुन नदिनेगरी व्यवस्था मिलाउन महानगरले भनेको छ।
काठमाडौ । सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने भएको छ । महिनाको अन्त्यतिर कर उठाउनका लागि खुकुलो गर्न लागेको भन्दै केही अधिकारीहरुले नै गुनासो भने गरिरहेका छन् ।राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नउठाए कर्मचारीलाई बाँड्ने तलब नै संकलन हुँदैन । सबैभन्दा धेरै आन्तरिक कर उठ्ने ठाउँ नै काठमाडौ हो । यसैले काठमाडौ उपत्यकामा कर उठाउनका लागि निषेधाज्ञा खुकुले पारिने […]
भोली मेरो बेहुली बन्ने पालो” रमा उत्साहित हुँदै भन्दै थिइ साथीहरुलाई। “आजको भाँडाकुटी भन्दा धेरै रमाईलो हुन्छ भोली बुझिस्..” भोलीका बेहुला साने पनि साथीहरुमाझ रवाफ देखाउँदै थि यो। “छोरी तेरालागि कपडा ल्याइदेका छौं आज सहरबाट, हेर त ! कस्तो लाग्यो ? बेहुली हुँदा त राम्री देखिनुपर्यो नि । रातो साडी, रातै ब्लाउज, पहेंलो पटुका,राम्रा बुट्टेदार […]
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको बडादसैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । असोज २१ गते बिहीबार बिहान ११ः४६ बजे घटस्थापनाको साइत रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । घटस्थापनाका दिन चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग परेकाले ११ ः४६ बजेअघि चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको शान्ति गरेर घटस्थापना गर्नुपर्छ । असोज २२ […]
भारतीय सीमा नजिकै चिनियाँ जनसेनाको गस्ती बढ्यो, दिल्लीमा तनाव !
नेपालको नयाँ नक्साबारे बोल्यो भारत : हामीलाई अस्वीकार्य